Dhismaha Dalkeena – Hanoolaato Somalia National Party
Dhaqaalaha Dalkeena iyo Dadkeena
Dhaqaalaha, caafimaadka iyo aqoonta waa sadexda wax oo midba mida kale kayareysan muhiimada ay inoo leeyihiin anaga Hanoolaato ah iyo dalkeena iyo dadkeenaba. Waxaan fiiro dheer u yeelan doonaa sidii aan dhaqaalaha dalka iyo tan dadkaba kor ugu qaadi lahayn. Wax walba oo qof uu sameeyo labo mid ayay badanaa ku dhamaadaan. Aakhiro ushaqeysi iyo Aduun ushaqeysi. Aduun ushaqeysina wuxuu kusoo aroora sidii dhaqaalaha loo kordhisan lahaa.
Si dalkeena uu qani unoqdo iyo meel barwaaqo ah oo aan anagoo dhan kufaaiidno kana faaiidno waa in aan anaga marka hore dhaqaalaysanaa oo ushaqeynaa kana ilaalinaa oo kadifaacnaa wax walba oo wax udhimi kara. Waa in aan hawadeena ka ilaalinaa qashinka oo dhan, anagoo kafaaiidaysanayna taariikhda ay reebeen dalalkaan naga hormaray oo hawadooda qurmiyay oo qiiq xun oo nafta iyo nolosha halis u ah kushubay oo kabuuxiay hadana kashalaynaya oo hada kow kasoo bilaabeen sidii ay hadana usifayn lahaayeen markii ay caafimaadkooda wax udhintay. Anagoo kaleexanayna khaladaadka ay dalalka kale soo galeen, waa in aan la imaanaa qorsha dhaqaalaheena kor uqaadi kara dalkeena iyo dadkeenana aan waxba udhimaynin.
Waxaan marka xooga saari doonaa korontada dabiici ah oo laga dhaliyo qoraxda, biyaha wabiyaasha iyo kuwa badda, hawada iyo hirka badda. Dalkeen wuxuu helaa qorax aan ubadan oo maalin walba ku dhawaad ayuu helaa 12 saacadood oo qorax ah dalku badankiis. Hadii marka aan Solar pannels koronto kadhalino wax aad ubadan oo lagayaabo in kaligiis uu baahideenaba buuxiyo aan ka heli karnaa.
Wadatashi iyo Hawl Wadaag
Hanoolaato waxay aaminsan tahay in wax walba ay ku fiican yihiin in wadatashi iyo isla ogol. In deegan kasta wixii laga qaban rabo kow dadka deegaan kaas lala tashado. Markii ay stageka koowaad oo wadatashiga gudubto dowlada ay markaas soo plan garayso oo qorshihii oo dhameystiran markale gudi ay deegaanka iskasoo doorteen iyo dowlada ay kulmaan si ay markale iskula fiiriyaan. Stagekaan labaad hadii ay gudubto waa kaas laakiin hadii ay gudbi waydo oo wax kasoo noqdaan laiska saxo wixii khaldan oo markaas kadib fulinta loo dhaqaaqaa. Hanoolaato waxay qiraysaa in deegan kasta dadka kunool ay leeyihiin go’aan kiisa maadaama ay ayagu lanoolaayaan faaiido iyo khasaaro labadaba wixii kasoo baxa.
… Guci si aad u daawatid …
Email kaaga inoo qor
Si aan Kula Socod Siino